Ma jiraan wax Xadida Magacaabista Faylka ama Faylka? - Liiska Faylka fudud
Magacaabista faylka iyo faylka waa wax aan marwalba la halgamo. Luuqadaha yurub iyo bariga waa caqabad gaar ah. Nasiib darrose, qawaaniinta magac-u-qoridda faylalku way ku kala duwan yihiin nidaam kasta oo hawlgal, iyo sidoo kale HTTP. Waxa ka shaqeeya mashiinkaaga, waxaa laga yaabaa inuusan u shaqeyn sidii URL.
Markaa aniga sida ugu fiican ayaan sameeyaa.
Wax kasta oo aad soo rarto ama aad ku darto meel fog oo ka mid ah galka Liiska Faylka waxaa si otomaatig ah loogu magacaabi doonaa (nadiifsan) sida soo socota:
Dhibco looma oggola faylka ama magaca faylka waxaana lagu beddeli doonaa jajabyo ama hoosta.
Boosaska ayaa dhibaato xun ku leh URL-yada, markaa:
Booska waxaa loo keydin karaa muujinta. Tag Liiska Faylka> Dejinta Tab> Dejinta Muujinta oo calaamadee sanduuqa "ilaali meelaha". Magaca faylka ayaa wali ku lahaan doona jajab meeshii boosaska, laakiin waxaa lagu beddelay-gadaal boosas kaliya oo la soo bandhigayo.
Sidoo kale waad qarin kartaa kordhinta, haddii qaybtaasi cabsi geliso isticmaaleyaashaada…
Jilayaashaan gaarka ah waa ok. Wax kasta oo kale ayaa dhib noqon kara.
Haddii magaca fayodhowrka shaqadiisa ay dhibaato badan ku haysato nadiifinta magaca faylkaaga, waxaa si fudud loogu magacaabi karaa magac-aan-file.ext. Waxaad magacaan ugu beddeli kartaa wax ku habboon liiska Liiska Fursadaha Maamulka.
Adeegso Goobta Sharaxaada
Haddii magaca faylka nadaafaddiisu ay dhibaato kugu tahay, waxaad isticmaali kartaa qaybta Faylka Faylka si aad u geliso magaca saxda ah. Goobtani waxay u muuqataa isla markiiba hoosta magaca faylka waxayna haysaa qoraal aan la sifeyneynin sida ugu badan ee magaca faylka ay tahay inuu noqdo.
Nasiib darrose, qawaaniinta loogu magac daray faylalkayaga iyo faylkeenna ayaa aad uga xaddidan internetka marka loo eego kuwa kombiyuutarrada shaqsiyeed. Waxaan isku dayaa inaan intii karaankeyga ah ka dhigo iskuxirka xiriirinta anigoo ixtiraamaya magaca isha, oo waan sii wadi doonaa inaan sidaas sameeyo.
Jawaab celinta waa la qiimeeyay…